सरकार ! धर्ना दे अब - सुनाखरी न्युज
सरकार ! धर्ना दे अब
Posted on: May 20, 2021 - 1:18 pm
यो लेख लेख्दै गर्दा पनि म पढिरहेछु मृत्युका समाचारहरु । सामाजिक संजालहरुमा म आफै लेखिरहेछु श्रद्धान्जली र समवेदनाका हरफहरु । कतै डाक्टरको मृत्यु , कतै नर्स को, कतै शिक्षक ढलेका छन् त कतै वकिल , कतै कलाकार त कतै को । दुखका साथ भन्नु पर्छ कि महामारी यसरी फैलिएको छ कि महामारीले मान्छे नमरेका त कुनै शहर, गाउँ , बस्ति अनि घर र परवार छैनन् । यस्तो लाग्छ अरुको मृत्युमा समवेदना लेख्दै गर्दा अरुले आफैलाई समवेदनाका शब्दहरु लेख्दै हुनेछन केवल पोष्ट हुन बाकी छ । आखिर कैले सम्म महामारीको नाममा यहि अवस्थामा रहिरहने त? कुनै विकल्प छैन ?अरु देशले महामारी रोक्न सफल भैसक्दा सम्म हामी किन लाश गन्नैमा व्यस्त छौं ?
आज कोरोनाको महामारी यो अवस्थामा आइपुग्न हामीले नै गरेका साना साना गल्तिले गर्दा नै त हो । चीनमा महामारी चल्दै गर्दा पुरै विश्व हाँसेर बसेको थियो । संसार ढुक्क थियो तर आज पुरै संसार निरिह बनेको छ। Trump कै कारण अमेरिकामा लाखौं मर्न पुगे । युरोपले खेलाची गर्दा अझै उठ्न सकेको छैन । कोरोनाकै बिचमा चुनाव गराउनु नै आज भारतलाई अभिशाप बनेको छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ महामारी बाजा बजाएर आउदैन तर त्यसो भन्दैमा यसलाई रोक्न नसकिने हो त ? अनि यो भन्दा पहिले पनि यस्तो समस्या आएको थिएन ? अनि थियो भने ति हरेक महामारी कुनै न कुनै रुपमा नियन्त्रण भएको छ र यो पनि अवश्य हुनेछ तर प्रश्न क्षति कति हुने र यसले पुर्याउने नोक्सानीमा हामी कति भागीदार बन्ने भन्ने हो । आज कोरोनाको महामारी यो अवस्थामा आइपुग्न हामीले नै गरेका साना साना गल्तिले गर्दा नै त हो । चीनमा महामारी चल्दै गर्दा पुरै विश्व हाँसेर बसेको थियो । संसार ढुक्क थियो तर आज पुरै संसार निरिह बनेको छ। Trump कै कारण अमेरिकामा लाखौं मर्न पुगे । युरोपले खेलाची गर्दा अझै उठ्न सकेको छैन । कोरोनाकै बिचमा चुनाव गराउनु नै आज भारतलाई अभिशाप बनेको छ । आज हामी पनि हाम्रै कारणले ठुलो क्षति भोगिरहेका छौं । न त सरकार सचेत बन्न पुग्यो न त नागरिक नै।
इटालीका गल्लि गल्लिमा लाशहरु जल्दै गर्दा मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले संसदमा बसेर बोलेका थिए कि बेसार पानीले कोरोना जान्छ भनेर । के आज मर्ने जति बेसार नपाएर नै मरेका हुन् त ? मनोवल बढाउने कुरा एउटा होला तर अरु देशका सरकार प्रमुखहरु नागरिक बचाउन औषधि बोकेको जहाज नै अपहरण गर्न आदेश दिदै गर्दा मेरो देशका प्रम अम्बाको पात उमालेर गल गल गरेपछि कोरोना जान्छ भनेर सिकाउदै थिए । अरु देशका प्रमुखहरु खोपको लागि चेक काट्दै गर्दा मेरो देशका प्रम संसद्को र संविधानको शिर काट्दै थिए । आज अरु देशका नागरिकहरु खोपको लाइनमा बसेर खोप लगाउदै गर्दा मेरो देशका नागरिकहरु आफन्त बचाउन अक्सिजनको लाइनमा बसिरहेका छन् र प्रम भन्दै छन् अझै कि गोर्खालीलाई कोरोनाले छुदैन जस्तो लागेको थियो भनेर । मेरो देशमा जनताको लागि भनेर दश बर्ष मान्छे मार्ने नेता र बीसौं बर्ष कम्युनिष्ट आन्दोलन गरेको भन्ने नेताहरु माईतीघरमा लम्पसार परेर हामी यता छौं भन्दै गर्दा मेरो देशका प्रम जुलुश हेर्न नारायणहिटी आऊ भन्दै कराउदै थिए । तर आज पशुपतिको घाट बाट मुर्दाहरुले भनिरहेका छन् हामी यता छौं भनेर नेता ज्यु । प्रम ज्यु अस्पताल र सडकमा गएर हेर्नु पिडितहरु कसरी तडपेका छन् भनेर । हामी नागरिक पनि त उस्तै हो । दुई चार महिना बिहे नगरेर के जान्थ्यो ? चाड नमानेर को रिसाउने थियो र? घरमा मासु र भात बेसरी हसुरेर बाहिर दौडेको नाटक गर्नेलाई के भन्नु र खै ? अझ कतिले त मौका पनि छोपे बिहेवारी लगायतका कार्य गर्न धेरै लाई बोलाउनु पनि पर्दैन सस्तैमा उम्किन्छ भनेर ।
भो अब निदाउन छोड सरकार । धेरै जनताहरु चिर निन्द्रामा परि सके । अब जतिसक्दो छिटो सबै जनताहरुलाई खोपको दायरामा ल्याउनु पर्छ अनि मात्र महामारी लाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ l जनताहरु पनि भो अब भोज खान छोडौं । आजको भोज भोलि आफ्नै आफन्तको श्राद्ध नबनोस ।
जे हुनु भई त सक्यो । महामारीले चरम रुप लिई त सक्यो । सरकार अब अन्तिम विकल्प भनेकै खोप हो जुन जुन देशले खोप बनाएका छन् हरेक देशहरुमा गएर खोप मागौं , चोर्नु पर्छ चोरौं, भिख माग्नु पर्छ मागौं तर जनता लाई बचाउन पर्छ सरकार । चीनले एक दिनमा डेढ करोडलाई खोप लगाउछ रे एक दिनको खोप मागौं नभए आधा दिनको मागौं त्यतिले पनि पुग्छ हामीलाई अहिले । हिजो रोटी र बेटीको सम्बन्ध भनेर संसदमा ताली खानेलाई भनौं कि अब बेटी बचाउने बेला भो भनेर । करिब १५ लाखले पहिलो मात्रा लगाएर अब दोस्रो मात्रा लगाउने समय भएको छ यदि समयमा आएन भने पहिलो मात्रा लगाएको अर्थ हुदैन । बरु धर्ना दिए हुन्छ सेरमको अफिस बाहिर । हो हामीले धेरै आन्दोलन र धर्नाहरु गर्यौं सरकार आफ्ना स्वार्थहरु पुरा गर्न तर अब जनताको लागि धर्नामा बस्ने बेला भएको छ । सबै मन्त्रीहरु जहाज लिएर गए हुन्छ धर्ना दिन । प्रम सेरमको अफिस बाहिर धर्ना देउ । पोखरेल जी सिनोफार्म बाहिर धर्नामा बस कोहि रुस जाऊ कोहि अमेरिका जाऊ र पलेटी कसेर बस कि खोप नलिई जादैनौ भनेर । जनताले त धन्यवाद दिने नै छन् विश्वले सलाम गर्ने छ । सायद आहिले सम्मको पाप पनि पखालिने छ । अहिले सम्म गरेको एउटा कुरा त काम लाग्छ । होइन अब पनि बेसार र अम्बाको पातमा भर पर्ने हो भने मलामीको त अभाव छ नै छ अब लाश पोल्ने दाउराको अभाव हुनेछ अनि विदेश बाट जहाजमा बन्चाराहरु आयात गर्नु पर्ने दिन आउन सक्छ । दाउरा काट्ने टेन्डर खोल्नु पर्ने हुन सक्छ।
भो अब निदाउन छोड सरकार । धेरै जनताहरु चिर निन्द्रामा परि सके । अब जतिसक्दो छिटो सबै जनताहरुलाई खोपको दायरामा ल्याउनु पर्छ अनि मात्र महामारी लाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ l जनताहरु पनि भो अब भोज खान छोडौं । आजको भोज भोलि आफ्नै आफन्तको श्राद्ध नबनोस । सबै सचेत बनेर प्रयास गर्ने हो भने फेरी आउने छ सुनौलो बिहानी ।
( लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ )